ပျက်စီးပြို ကွဲ ခဲ့ရေ သာ – Hlataw.com
မိုးလင်း ကတည်းက အသဲအသန်ရွာသွန်းနေသော ကိုရွှေမိုးက ညနေရောက်မှာသာ လုံးလုံးတိတ်သွားတော့သည်၊ဇွဲကိုက ဆိုင်ရှေ့မှာပစ္စည်းလေးတွေ ပြန်ခင်းရင်းဈေးဝယ်သူအလာကိုသာ ထိုင်စောင့်နေမိတော့သည်၊မိန်းမက ဆိုင်အတွင်းက စက်ချုပ်ရင်း ညည်းသံသဲ့သဲ့ကို ကြားမိတော့ ပြုံးမိပြန်သည်။ ကျွန်တော်နာမည်က ဇွဲကိုပါ ၊အမျိုးသမီး နာမည်က မိုးမြင့်သူပါ၊ကျွန်တော်က စက်ရုံတစ်ရုံမှာ စာရေးလုပ်တယ်၊သူကတော့ အရင်က အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်ရင်း ကျွန်တော်နဲ့ညားပြီးတော့ စက်ချုပ်သင်တန်းလေးတက်ကာဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်တာ၊မထင်မှတ်ပဲ အဆင်ပြေသွားတော့ဆိုင်လေးကို တိုးချဲ့ စက်ချုပ်ပစ္စည်း(အပို)လေးတွေပါရောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်၊အိမ်ထောင်ကျတာ နှစ်နှစ်ကျော် သုံးနှစ်နီးပါးသာဖြစ်လာခဲ့တယ်
ကလေးတော့မယူရသေးဘူး၊စီးပွားရှာကောင်းနေတုန်းမို့လည်းပါတာပေါ့ဗျာ၊၊ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးနေရင်း ရောက်လာသောဈေးဝယ်သူကြောင့် ဇွဲကို ထရပ်လိုက်ရင်းက`ဘာယူမလည်း ညီမ´ ဟုတ် အကို ဟိုဟာ ထုပ်သီးလေးဝယ်ချင်လို့ ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် ညီမ ဒီဘက်မှာပါ၊လိုချင်တဲ့အရောင်ရှိရင်လည်း ပိတ်စ ပါလာရင်ရိုက်ပေးပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဖြူလေးပဲပေးပါ တစ်ထုပ်ဘယ်လောက်လည်းဟင် ဆယ်လုံးပါတယ်ညီမ တစ်ထုပ် သုံးရာပါ ဟုတ် တစ်ထုပ်ပေးပါ ပြီးတော့—- ဇွဲကိုလည်းကောင်မလေး ယူသမျှတွေကို ကျသင့်ငွေတွက်ရင်း ပိုက်ဆံပြန်အမ်းပြီးတော့ပြန်ထိုင်လိုက်ရင်း ဆိုင်ထဲကထွက်သွားသော ကောင်မလေးရဲ့နောက်ပိုင်းအလှ ကို မထင်မှတ်ဘဲ ကြည့်မိလိုက်သည်၊`အင်း အိုးကောင်းတာပဲဟ ဟိဟိ´ဟု စိတ်ထဲက ကျိတ်ပြစ်မှားရင်း အတော်ဝေးဝေးထိလိုက်ကြည့်မိလိုက်တော့သည်။
`အဟမ်း အဟမ်း´ဟု အိမ်ထဲက မိန်းမ ရဲ့ သတိပေးချောင်းသံကြားမှ မသိသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ မျက်မှာလွှဲမိသည်။ ကောင်မလေးနာမည်က မြတ်ဝတ်ရည်ချိုတဲ့ နောက်ရက်တွေဈေးလာဝယ်တော့ ရင်းနှီးသွားတော့ သူပြောပြတာပါ၊မြတ်ဝတ်ရည်ချိုက အဒေါ်တွေနဲ့ အထည်ချုပ်လာလုပ်ရင်း တက္ကသိုလ် တတိယနှစ်ကို အဝေးသင်တက်နေသူဖြစ်သည်၊အသက်က ၂၀ပဲ ရှိသေးတယ် လက်ရှိရည်းစားတော့မထားရသေး(နောက်က ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်နေသော အဒေါ်တွေကြောင့်ဆို ပိုမှန်ပါတယ်)သူ့အဒေါ်တွေကလည်း အဒေါ်သာပြောတာ အသက်က ဆယ်နှစ်ခန့်သာကွာတာမို့ နောက်ကဘယ်သွားသွားအမြဲပါနေတော့ တော်ယုံ ယောကျာ်းလေးမကပ်ရဲတာလည်းပါပါတယ်။
ကိုကလည်းအိမ်ထောင်သည် သာဆိုတာ ၂၄ခန့်သာရှိတာမို့ သူနဲ့တော့အသက်သိပ်မကွာတော့ ခဏလေးနဲ့ ရင်းနှီးသွားကြတာပါ၊အဲ တစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်ဗျ ကျွန်တော်က အိမ်ထောင်သည်ပေမယ့် မိန်းမနဲ့က သိပ်အဆင်မပြေဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူက ကိုယ်လုပ်ချင်သလို ပေးမနေဘူးဗျ၊အလုပ်ပင်ပန်းတယ် စောစောအိပ်တယ် ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ ဆိုအကြောင်းပြတော့ လင်မယားကိစ္စကျသိပ်အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ၊ပြသနာက အဲ့မှာစတာပါပဲ သူကအဲ့လိုတွေ လုပ်တော့ ကျွန်တော်စိတ်တွေက ဈေးလာဝယ်သူချောချောလှလှ ကောင်မလေးတွေကိုပြစ်မှား သူက သဝန်တို ပြသနာတွေဖြစ်နဲ့ တော်တာ် စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်ဗျာ တစ်နေ့ ကျွန်တော်က လမ်းထိပ် ဈေးသွားဝယ်တော့ ရှေ့က လျှောက်သွားနေတဲ့ မြတ်ဝတ်ရည်ကိုတွေ့တော့ စိတ်က ဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဗျာ သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးသူ့နောက် စက်ဘီးလေးအသာနင်းလို့ လိုက်ခဲ့တယ်၊
အနောက်ကနေကြည့်တော့ တင်ဝိုင်းဝိုင်းလေးနှစ်လုံးက တစ်လုံးတက် တစ်လုံးဆင်းနဲ့ သိပ်လှတာပဲဗျာ၊ မကောင်းတတ်တာနဲ့ ရှေ့ကိုကြိုသွားပြီးလိုတာလေးဝယ်ပြီးစောင့်နေမိတယ်၊ခဏနေတော့ သူလည်းဈေးတန်းကိုငေးရင်း ကျွန်တော်ကိုမြင်သွားပုံပေါ်တာနဲ့ မြတ်ဝတ်ရည် ဈေးလာဝယ်တာလား ညီမလေး ဟုတ်တယ် ကိုကြီး ၊ကိုကြီးရော ဘာတွေဝယ်တာတုန်း အစုံပါပဲဟာ ခုလ္ဘက်ရည် သောက်မလို့ သောက်ပါဦးလား အစ်မကော လာပါ ကျွန်တော်တိုက်ပါ့မယ် ဆိုတော့သူ့အဒေါ်က အင်တင်တင်နဲ့ဗျ၊ဒါပေမယ့်လည်း လိုက်လာရှာပါတယ် ကျွန်တော်လည်း သူတို့ဖို့ပါ မှာပေးပြီး ဟိုမေး ဒီမေးမေးရင်းက ကောင်မလေးအဒေါ်က `ဝတ်ရည် ခဏနေဦး ငါ ဟိုရှေ့မှာ ဈေးသွားဝယ်လိုက်ဦးမယ် ´ဆိုကာ ထထွက်သွားလေသည်၊အဲ့တော့မှ ကျွန်တော်လည်း ဝတ်ရည် တကိုယ်လုံးကိုသိမ်းကြုံး ကြည့်မိတော့တယ်၊မျက်ခုံးကောင်းကောင်းလေးရယ် နှုတ်ခမ်းမွှေးလေးခပ်မဲမဲလေးတွေရယ်က ရင်ခုန်ချင်စရာဗျာ၊စပို့ရှပ်လေး ဝတ်ထားတဲ့ အောက်က ရင်အစုံက သိပ်မကြီးပေမယ့် အောက်ကခါးသေးသေးရယ် ကောက်ချိတ်နေတဲ့ တင်လေးရယ်ကြောင့် ဝတ်ရည်က တော်တော်လှပါတယ်။
ဟိတ် ဆရာကြီး ဘာတွေကြည့်နေတာလည်း လူကိုမမြင်ဖူးတဲ့အတိုင်းပဲ အင်း ဝတ်ရည်က အရမ်းလှနေတော့လေ ကြည့်မိတာပါ အိုး မလှပါဘူး လို့ ပြုံးယောင်ယောင်လေးနဲ့ပြောလိုက်ပေမယ့် သူ့မျက်လုံးလေးတွေက ကျေနပ်ကြောင်းပြနေလေရဲ့၊သူ့အဒေါ်ပြန်မလာခင် ရိသဲ့သဲ့ပြောထပ်ပေမယ့် ဝတ်ရည်က ပြုံးစိစိနဲ့ ဆိုတော့ စိတ်မဆိုးဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ၊အဲ့တာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပြီးမှတ်လိုက်ကာ သူ့အဒေါ်ပြန်ရောက်လာတာနဲ့ စကားစဖြတ်ရင်း လမ်းခွဲကာ ပြန်ခဲ့လိုက်တော့သည်။ ဒီလိုနဲ့ လေးငါးလလောက်ထိ ဝတ်ရည်နဲ့ နေ့လည်ရောက်တိုင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ စကားတွေ မထိတထိလေးတွေ ပြောကြရင်း တစ်နေ့တော့ သူကျွန်တော့်ကို​မေးလာပါလေရော၊ ကျွန်တော်လည်း သိတဲ့အတိုင်း ခပ်ညံ့ညံ့ ယောကျာ်းတို့ လုပ်နေကြပုံအတိုင်း ချစ်တယ်တို့ ဘာတို့ ပလီပလာပြောလိုက်တော့တယ်ဗျာ။
သူက မနက်ဖြန် သူကျောင်းသွားအပ်တော့မှာမို့ အလုပ်ဖွင့်ရက်ဖြစ်နေတော့ အဒေါ်တွေမလိုက်နိူင်ကြောင်း ဖြစ်နိူင်ရင်လိုက်ပို့ပေးပါပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပို့ပေးမယ် ကတိပေးလိုက်တယ်။ မိန်းမ – မောင် ဒီနေ့ဘယ်သွားမလို့လည်း လှလှပပတွေဝတ်လို့ ကျွန်တော် – ဟ အလုပ်ကိုအမြဲသွားနေတာ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ တစ်ခါတစ်လေများ ဝတ်စားထားရင် မင်းကအစပြောတော့မယ် ရုံးရောက်ရင်ပိုဆိုးပြီ သွားမယ်ကွာ စောစောစီးစီး ဘာတွေမေးနေမှန်း မသိဘူး မိန်းမ – စတာပါ မောင်ရယ် မက မောင် ဒီလို ဝတ်စားနေလို့ အပြစ်ပြောဖူးလို့လား ကျွန်တော် -မစနဲ့ ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူး လို့ပြောလိုက်တော့ သူမျက်နှာပျက်သွားတာတော့ သတိထားလိုက်မိပါသည်။
မိန်းမ – ဟိုလေ မ ဒီရက်ထဲ နေသိပ်မကောင်းချင်ဘူး၊ရင်ထဲလည်းသိပ်မကောင်းဘူး၊ခေါင်းတွေလည်းမူးမူးနေလို့ ကျွန်တော် -မူးမှာပေါ့ နင်က ညညကျ ဆယ်နာရီလောက်ထိအလုပ်လုပ်နေမှတော့ မမူးခံနိူင်မလား၊ငါပြောသားပဲ အလုပ်ကို ညနက်ထိ မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုတာကို နင်နားထောင်လို့လား တော်ပြီဟာ မပြောနဲ့တော့ သွားတော့မယ် လို့ပြောကာ ကျွန်တော် ထွက်လာခဲ့တော့သည်။ လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ဝတ်ရည်က အသင့်စောင့်နေတာတွေ့လို့ ပြုံးပြလျှက်က `ဝတ်ရည် စောင့်နေရတာ ကြာပြီလား ဆောရီးနော် အိမ်ကတစ်ယောက်က ရစ်နေလို့´ ရပါတယ် ကိုကြီး ၊ ဟိုးမှာ ကားလာနေပြီ သွားရအောင် အင်း လာ လာ ကားပေါ်ရောက်တော့ ကျောင်းကိုပဲတန်းသွားလိုက်ကာ သူမလုပ်စရာရှိတာတွေကို နောက်ကလျှောက်လိုက်ပေးရင်းဆယ်နာရီ ခွဲ ခန့်ရောက်တော့ သူမ ကျောင်းအပ်ခြင်း ကိစ္စက ပြီးပြတ်သွားလေသည်၊ ကိုကြီး ဗိုက်ဆာပြီလား ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင် ထိုင်လေ `အင်း´ လို့ဆိုကာ ကျောင်းကန်တင်းဘက်လျှောက်လာရင်း ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဝင်ထိုင်ကာစားသောက်ရင်းမှ မနေ့ကအကြောင်း စကားစမိတော့သည်။
ညီမလေး ကိုကြီးမနေ့က ပြောထားတာလေးကို ပြန်ဖြေဦးလေ အော် ကိုကြီးမှာ မိန်းမနဲ့လေ၊ မဖြစ်နိူင်ပါဘူး ကိုကြီးရယ် အာ ညီမလေးကလည်း ကိုကြီးတို့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းလည်း သိရဲ့သားနဲ့ အဆင်မှမပြေတာကို ၊ကိုသူနဲ့ ကွာရှင်းတော့မှာပါ ဟို ညီမကလေ အဲ့လို အဲ့လိုတော့ မဖြစ်စေချင်…. `တော် တော်ပါတော့ ညီမလေး အကိုသိပါပြီ အဲ့လောက်ဆို´ ဟို မဟုတ် အဲ့လိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး `အဲ့တာဆို ကိုကြီး အခု တစ်နေရာသွားမယ် မင်းလိုက်မှာလား´ ဘယ် …ဘယ်ကိုလည်းဟင် `​မမေးနဲ့ လိုက်မှာလားမလိုက်ဘူးလား´ ဟို…ဟို ကဲပါ ဟိုတွေ ဒီတွေလုပ်မနေနဲ့ သွားမယ် ထ ..လာ လိုပြောရင်းသူမလက်ကလေးကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်းကိုင်ကာ ဇွဲကို တို့ ထိုင်ရာက ထွက်ခဲ့ရင်း ကျောင်းရှေ့က တက္ကဆီ တစ်စီးကိုငှားရင်းကားပေါ် တက်ခဲ့တော့သည် ၊တစ်လမ်းလုံးလည်း စကားမပြောဖြစ်ကျ၊တည်းခိုခန်းတစ်ခုရှေ့ရောက်တော့ ကားခ ရှင်းကာ ခပ်တည်တည်ပဲ အခန်းငှားရင်း ကောင်မလေး လက်ဆွဲကာ အခန်းထဲ ဝင်ခဲ့လိုက်တော့သည်။
တည်းခိုခန်းအတွင်း ရောက်တော့ ဝတ်ရည် ကစပြီးငိုပါလေတော့သည်၊ဇွဲသူလည်း ခြေမကိုင် လက်မကိုင်မိနဲ့ ရင်တွေပါ တုန်သွားသည်။ ညီမလေး ဘာဖြစ်လို့လည်း၊ ဘာလို့ငိုရတာလည်းကွာ အဟင့် ဟီးအီး အင့် ရွှတ် အကိုကြောင့်ပေါ့ ဟမ် အကို ဘာလုပ်လို့ တုန်း အကို စိတ်ဆိုးမှာစိုးလို့ ဘယ်သွားမလည်းမမေးခဲ့တာပါ၊အခု အကိုကခေါ်လာတော့ တည်းခိုခန်းကိုလား၊အကိုပြောတော့ ညီမကို ချစ်တယ်ဆို ဒါအကိုချစ်တဲ့အချစ်လား ညီမလေးဘက်ကိုရော နည်းနည်းထည့်မတွေးပေးတော့ဘူးလား အဟီးဟီး ဟင့်ဟင့် မဟုတ်…မဟုတ်ရပါဘူး ဝတ်ရည်ရယ် ဝတ်ရည် ထင်သလို မဟုတ်ရပါဘူး အကိုက… အကိုက အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်ပါ ဝတ်ရည်ဘက်ကို ထည့်တွေးပေး လို့ တခြားသူမြင်ရင် ဝတ်ရည်ကိုသိတဲ့သူမြင်ရင်အထင်သေးမှာဆိုးလို့ အခုလိုလုံခြုံလူမသိတဲ့နေရာမှာ အေးဆေးစကားပြောရအောင် ခေါ်ခဲ့တာပါ အကို့စေတနာ အမှားတွေပါ မပြောပါနဲ့တော့ ….ကိုကြီးရယ် အခု ဝတ်ရည်ပြန်ချင်ပြီ ဝတ်ရည်ကို ပြန်ပို့ပေးပါ နော် အင်းပါ ဝတ်ရည် အကို့ကို ထပ်အထင်မလွဲစေရပါဘူး လာ ..ခုပြန်ပို့ပေးမယ် အွမ်း …ဟုဆိုရင်း ဝတ်ရည်က စလင်းဘတ် အိတ်လေးထဲမှ မှန်သေးသေးလေးကိုထုတ်ရင်း ခရင်မ်ပတ် နည်းနည်းပြန်ရိုက်ကာ ထထွက်ခဲ့တော့သည်။
အိမ်ပြန်လမ်းတလျှောက်လည်း နှစ်ဦးသား စကားမဆိုမိကြ၊လမ်းတလျှောက် ဝတ်ရည်က သူ့လက်ကိုအားကိုးတကြီးဆုပ်ကိုင်ကာသူ့လက်မောင်းကိုမှီတွယ်ရင်း တိတ်ဆိတ်ကာလိုက်ပါလာရင်း ကားပေါ်က အဆင်း နှုတ်ဆက်မှ `မနက်ဖြန် ဖုန်းဆက်နော် ကိုကြီး´လို့မှာရင်းဆင်းသွားလေသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မိန်းမဖြစ်သူက အစောကြီးပြန်လာလို့မေးရှာသေးသော်လည်း နေသိပ်မကောင်းချင်လို့ လို့ပဲဆိုပြီးအဝတ်စားလဲကာ အိပ်ယာထဲဝင်လှဲနေမိတော့သည်။ နောက်ရက်ရောက်တော့ ဝတ်ရည်ကပဲ သူကိုဖုန်းစခေါ်ရှာပါသည်၊မနေ့က ကိစ္စကိုသူလည်းဘာမှအစဖော်မနေတော့ဘဲ မသိလိုက် မသိဘာသာသာ နေလိုက်တော့သည်၊ဒီလိုနဲ့ပဲ ဝတ်ရည်နဲ့ ဖုန်းနေ့လည်ဘက်ပြောလိုက် အလုပ်တွေလုပ်လိုက်နဲ့ဟန်မပျက်ဆက်လုပ်နေခဲ့သည်။မြတ်ဝတ်ရည် ဈေးလာဝယ်ချိန်တွေမှာလည်း ပုံမှန်သာဆက်ဆံတာမို့ မိန်းမလုပ်သူကလည်းမသင်္ကာမဖြစ်ခဲ့၊
ဒါပေမယ် နောက်ထပ် ​လေးငါးလလောက်ကြာတော့ အခွင့်ရေးတခုက သူ့ထံ ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့သည်၊ကံကောင်းခြင်းပေလား ကံဆိုးခြင်းပဲလားဆိုတာတော့သူမသိခဲ့၊အကြောင်းကတော့ ဝတ်ရည်ဆွေမျိုးတွေထဲမှာ အသည်းသန်ဖြစ်သူ တစ်ယောက်ရှိလို့ သူ့အဒေါ်တွေ ရွာပြန်သွားခြင်းဖြစ်သည်၊ဝတ်ရည်ကတော့ နောက်လဆို ကျောင်းတက်ရမှာမို့ ခွင့်ယူလို့မဖြစ်တာမို့ ကျန်နေရစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ကဝတ်ရည်က သူ့ကိုသတိအရမ်းရနေကြောင်းပြောရင်း သူမပုံလေးတပုံ ပို့လာလို့ သူမှာဘယ်ဖွက်ရမှန်းမသိ၊ဖုန်းက (ပတ်စ၀က်စ်)တွက မိန်းမဖြစ်သူလည်းသိနေတာမို့ နောက်ဆုံးမှ သူ့ဖုန်းက (အော်ဒီယိုမန်နေဂျာ) လေးကို သတိရသွားကာ ထို ဖိုင် လေးထဲသာထည့်ပြီး သိမ်း ထားလိုက်လေသည်၊အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မိန်းမက ဖုန်းယူ ကိုင်တော့သူ့မှာရင်တထိတ်ထိတ်နှင့်၊မိန်းမက မောင် …..မတို့ တူတူ မအိပ်တာကြာပြီ၊စောစောအိပ်ကြမလား အင်း အဲ့တာမင်းစောစော အိပ်လေ ဖုန်းတွေကိုင်မနေနဲ့တော့ အင်း ထို့နေ့ညက ဆိုင်စောစောသိမ်းကာ မိန်းမ နှင့်အိပ်ယာအတူ ဝင်ဖြစ်သည်၊
(သိတယ်မလား ဒါမျိုးဆိုနှစ်ခါမပြောရပူးလေ)၊အိပ်ယာထဲရောက်တော့ မိန်းမကို ဖက်ရင်းက အနည်းငယ် ရင်သားတွေကိုပွတ်သပ်ရင်းက မိန်းမလက်ထဲ ငပဲလေးကိုထည့်ပေးလိုက်တော့ လက်နဲ့ကိုင်ကာအထက်အောက် ဆွဲပေးတော့ -ီးကြီးက တခဏအတွင်းထောင်မတ်လာတော့သည်။မိန်းမရဲ့ အက်ျီနဲ့ စပန့်သားဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရင်း အပေါ်တက်ခွကာနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းရင်းက -ီးကိုကိုင်ကာ အပေါက်ဝလေးတေ့ထည့်လိုက်သည်။ ဗြစ် …ဗြွတ်… အာ့… မောင် ဖြည်းဖြည်းလုပ်ဦး မလုပ်တာကြာတော့ နည်းနည်းကြပ်.. အိ ..နေတယ် အွမ်း ..စွိ…စွပ်.. ခနပါကွာ ပြီးရင်…အီး…အဆင်ပြေသွားမှာပါ အီး…ဝင်သွားပြီ…အ…ဗြွတ်…ဗြွတ်….အဆုံးထိ အာ့ဆို…..လုပ်ပြီနော် …..ပြွတ်…ပြစ်…. ခဏနေတော့ ပိုစေရှင်ပြောင်းကာ လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီးအနောက်ကနေကြုံးကြုံးဆောင့်ပြစ် လိုက်တော့ သူမ တင်သားတွေလှိုင်းထ တုန်ခါနေတာကိုကြည့်ရင်းပိုဖီးတက်လာသည်။
ဗြွတ်…ပလွတ်…မောင်..အာ့ အသံတွေအရမ်း..ဘူ .. ဗြွတ်.အ အရမ်းကျယ်တာပဲ …အာ့ မ ပြီးချင်ပြီလား ..ဟင်း..အီး….ပြီးတော့မယ်ဆို မှောက်ချလိုက် အင်း….ဗြွတ်….ခန..ရပ်ဦး သူမဝမ်းယားမှောက်ချလိုက်တော့ ဇွဲသူ အပေါ်ကနေဆီးကာဆောင့်ချရင်း(ဒီတကွက်က အနေမတတ်ရင် ခါးနာတတ်တယ်ကြားဖူးတယ်)သူမအပေါ် ဖိမှောက်ချလိုက်ကာ သူမလည်းပြီးသွားပြီး သူလည်းပြီးချင်လာပြီမို့ အားကုန်ကြုံးဆောင့်ရင်းက သူမသားအိမ်ထဲ ပန်းထည့် လိုက်တော့သည်။
ပိတ်ရက်ပေမယ့် အိမ်မှာဈေးရောင်းရင်း ညနေ နေဝင်ချိန် မှောင်စပြုလာတော့ ဇွဲသူက `မိန်းမရေ ငါကွမ်းသွားဝယ်လိုက်ဦးမယ်´ အင်း သွားလေ ငါ့ယောကျာ်းလည်းဒီနေ့ပင်ပန်းထားတာ နားတောင်မနားလိုက်ရဘူး၊သနားပါတယ်ဟယ် ရပါတယ်၊သွားပြီ သတိလည်းထားဦးမောင်ရေ ဆိုင်ကယ်တွေရှုပ် ကားတွေရှုပ်နဲ့ အွမ်း …..လို့ပြောရင်း ထွက်လာခဲ့တာ မြတ်ဝတ်ရည်တို့ အဆောင်လမ်းထောင့်လေး အရောက်`ကိုကြီး´ခေါ်သံလေးကြားလိုက်လို့ကြည့်လိုက်တော့ မြတ်ဝတ်ရည်က ညဝတ် စပန့်သား အက်ျီ ဘောင်းဘီ ဝမ်းဆက်ကလေးနဲ့ အရမ်းကို လှပလို့နေသည်။ ဘာလာဝယ်တာလည်း ကွမ်းလာဝယ်တာ ညီမလေး စကားခဏပြောရအောင်လေ ၊ ရတယ်မလား အင်း လာ ညီမလေး ဟိုဘက်နားကနည်းနည်းမှောင်တယ်၊အဲ့နားသွားရအောင်၊ဒီနားက တစ်ယောက်ယောက်တွေ့သွားရင်မကောင်းဘူး အင်း သွားလေ ဆိုတော့ စက်ဘီးလေးတွန်းရင်းရှေ့ကဦးဆောင်လာခဲ့တော့သည်။
အမှောင်ရိပ် တစ်နေရာရောက်တော့ ဇွဲသူရှေ့မှသွားနေသော ဝတ်ရည်က ရပ်လိုက်တော့ ဇွဲသူလည်း စက်ဘီးလေးကို အသာ ဒေါက်ထောက်ကာရပ်လိုက်သည်။ ဝတ်ရည်က ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် ခါးကိုဖက်လိုက်လေတော့ အသာအယာပင် သူမကိုယ်လုံး လုံးလုံး လေးကို ပြန်ဖက်လိုက်ရင်းက ဝတ်ရည် ဘာပြောမလို့လည်းဟင် အော်…ပြောစရာရှိမှ ခေါ်ရမှာလား ကိုကြီးရဲ့ အော်..မဟုတ်ပါဘူး ကိုကြီးပြောချင်တာက ကဲ ပြောချင်တာ နောက်မှထား အခု ကြာလို့ရလားဟင် ဘာ…ဘာလို့… အမလေး ကိုကြီးရယ် အခုလို ခဏလေးငြိမ်နေပေးပါလို့ပြောမလို့ပါ ကိုကြီးကိုလွမ်းလို့ ဖက်ထားချင်လို့….. ကိုကြီးး…. အွမ်း… ​ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မျက်လုံးချင်းဆုံအောင် စိုက်ကြည့်မိရင်း သူမ ပါးမို့မို့ကို အသာယာနမ်းမိတော့သည်၊ထို့နောက် သူမရဲ့ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းလှတဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးရေးရေးနဲ့ နီတျာတျာ နှုတ်ခမ်းလေးဆီ အနမ်းတချို့ ဆက်မိသွားချိန်က တိုတောင်းလွန်းလှသလိုပင်၊ တင်းကျပ်သော ပွေ့ဖက်မှုတွေအောက်မှာ ရမ္မက်သွေးတို့က အလိုလိုကြွတက်လာသလို အောက်ဖက်ဆီက ပူနွေးထောင်ကြွလာသာ သူ့ညီတော်မောင်ကလည်း သူမ ဝမ်းပျဉ်းသားလေးကိုထောက်မိတော့ ဝတ်ရည်တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီးအနောက်ကို တင်ပါးလးပစ်မိလေတော့ ဇွဲသူလက်တွေက တွေ့စကတည်းက ပစ်မှားမိနေသော တင်သားလုံးလုံးအယ်အယ်လေးတွေဆီ ပို့ကာ ဖျစ်ညှစ်နယ်ဖတ်ရင်းက အသက်ရှုသံတို့ကပြင်းထန်လာကြသည်။
ဇွဲသူ နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းနေရင်းက လွှတ်လိုက်ကာ အပြစ်ကင်းစင်သော ဝတ်ရည်မျက်နှာကလေးကို သေသေချာချာကြည့်လိုက်ရင်းက ကို့ စိတ်တွေ မထိန်းနိူင်တော့ဘူး ညီမလေးရယ်…. ကိုကြီးမနက်ဖြန်ကျရင် အလုပ်မဆင်းလို့ရလားဟင် အင်း ရ…ရပါတယ် ဝတ်ရည် ဘာ..ဘာလို့… ဝတ်ရည် အဒေါ်တွေ မရှိဘူးလေ ရွာပြန်သွားကြတယ် အဲ့ဒါလေ…. အွမ်း ဝတ်ရည် ဘယ်သွား… ဟိုးထား ဆရာကြီး လာမှာလား မလာဘူးလား လာခဲ့မယ်လေ အွမ်း အာ့ဆိုပြန်တော့နော် ` အင်း ကိုကြီး ပြန်တော့မယ်နော် တာ့တာ ´ဟု ဇွဲသူ နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်း ဝတ်ရည်ပါးပြင်ကလေးကို တစ်ချက်နမ်းကာ ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဆိုင်ပါ တပါတည်းသိမ်းကာ ရေမိုးချိုး ထမင်းစားပြီးတော့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ဘေးချကာ ဖုန်းကိုယူရင်း ဖေ့ဘုတ် မှ သူများတင်ထားတာတွေကို လိုက်ကြည့်နေတုန်း ဘေးမှာလာထိုင်သော မိုးမြင့်သူကြောင့် ဖုန်းကနေ မျက်နှာလွှဲရင်း မိုးမြင့်သူ ကို မိန်းမ အလုပ်ပြီးပြီလား အင်း မောင့်ကိုပြောစရာ ရှိလို့ ဘာလည်းပြောလေ မ ရဲ့ မ လေ ဟွာ မလာတာ ကြာပြီ အာ့မနက်ကလေ ဆီးစစ်ကြည့်လိုက်တော့လေ…. ဘာ..ဘာလည်း ဟင် မိန်းမ ဆီးစစ်တံမှာလေ အနီလေး နှစ်လိုင်းပေါ်နေလို့ နေ့လည်က ဆရာဝန်ဆီသွားပြတော့လေ အာ့ ဟုတ်တယ် သိလား ဘာ…ဘာတဲ့လည်းဟင် အာ ..ရှိနေပါပြီဆို..မောင်ကလည်း.. ကိုယ်ဝန်..ကိုယ်ဝန်လားဟင်..ဟုတ်လားလို့ မိုးမြင့်သူက ရှက်မျက်နှာလေးဖြင့် ပြုံးစိစိ လုပ်ခါ ခေါင်းငြှိမ့်ပြတော့ ဝမ်းသာမှုတွေ ကြည်နူးမှုတွေက ဇွဲသူရင်မှာ တလိမ့်လိမ့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ထို့နောက် မိန်းမကို အသာဖက်ကာ အိပ်ယာထဲလိုက်ပို့ရင်း မိုးမြင့်သူ ဘုရားရှိခိုးတာစောင့်ပြီးနောက် စကားတွေ တွတ်ထိုးနေမိတော့သည်။ခဏကြာတော့ မိုးမြင့်သူအိပ်ပျော်သွားလေသည်။ အိပ်မပျော်နိူင်သူက ဇွဲသူ၊ကလေးရတော့မည်ဆိုလို့ တအားပျော်မိတာမှန်ပေမယ့် ဝတ်ရည်ပေါ် ဖောက်ပြန်စိတ်မွေးမိတာတွေ မှားယွင်းမိတာတွေအတွက်နောင်တရကာ အိပ်လို့မပျော်နိူင်၊အကယ်၍များ ဝတ်ရည်နေရာမှာ` ငါ့သမီးလေးသာ ဆိုရင် ´ဆိုတဲ့အတွေးတွေက သူရဲ့စိတ်ကို နှိပ်စက်နေတော့တာပါ။ “မဖြစ်ပါဘူး အချိန်တွေ မလွန်ခင် ဝတ်ရည်ကို လမ်းခွဲမှ ဖြစ်တော့မယ်၊ဒီ့ထက်ပိုမှားလို့မဖြစ်တော့ဘူး၊ငါ ထပ်မှားလို့မရတော့ဘူး”လို့တွေးနေတုန်း မောင် မအိပ်သေးဘဲ ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလည်း၊ညဉ့်နက်နေပြီ အိပ်တော့လေ လို့တရေးနိူးလာသော မိုးမြင့်သူကပြောတော့ အွမ်း အိပ်မယ် မ ကော ဘာလုပ်မလို့ အင်းဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊လန့်နိုးလာတော့ မောင်မအိပ်သေးလို့ အိပ် အိပ် ကျွန်တော် လည်း အိပ်တော့မယ် အွမ်း …
မနက်ရောက်တော့ ရောက်တော့ ဝတ်ရည်ချိန်းသောနေရာကို သူမသွားဖြစ်ခဲ့ပါ၊ဝတ်ရည်ကို မလာဖြစ်ဘူးပဲ မက်ဆေ့ ပို့ကာ ဖုန်းပိတ်ပြီး သူအလုပ်ဝင်ခဲ့တော့သည်၊ထမင်းစားချိန်ရောက်လို့ ဖုန်းဖွင့်ကြည့်မှ သူ့ကို ဝတ်ရည် ဖုန်းခ်ါထားတာ အကြိမ်ကြိမ်၊ မဖြစ်တော့ သူဝတ်ရည်ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကို နှိပ်ရင်း ပြန်ခေါ်လိုက်တော့တဖက်မှ ချက်ချင်းပြန်ထူးလေသည်။ ဝတ်ရည် ညီမလေး အကို့ကိုမေ့လိုက်ပါတော့ကွယ် ဟင်…ဘယ်လို…ကိုကြီးဘယ်လိုပြောလိုက်တယ် ဟုတ်တယ် ညီမလေး အကိုတို့ ဒီ့ထက်ထပ်မမှားသင့်တော့ဘူးညီမလေးရေ အခုဆို အကို့မိန်းမမှာလည်းကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ .ဟဲလို…ဟဲလို..ဝတ်ရည် တဖက်က ငိုရှိုက်သံ သဲ့သဲ့ကြားရတော့သူလည်း စိတ်ကိုတင်းလိုက်ရင်းက `ဝတ်ရည် အကိုတို့ ခုကစပြီးနောက်ထပ် မပတ်သက်ဘဲ နေကြရအောင်နော်´
အဟင့်..ဟီးးးးအင်းပါ …အင်းပါကိုကြီး…ညီမလေးနားလည်ပါတယ်..ကိုကြီးတို့ မိသားစု ဘဝလေး အဆင်ပြေပါစေလို့ ညီမလေး ဆုတောင်းပေးပါတယ် ကိုကြီးရေ….ဟီးးး..ဟင့်…အဟင့် သူတစ်ဖက်က ငိုကြွေးသံတွေကို နားမထောင်နိူင်တော့ ၊နားထောင်နိူင်တဲ့ အင်အားလည်းမရှိတော့ တကယ်ဆိုမှားခဲ့တဲ့သူက ကိုပါ ဝတ်ရည်ရေ မင်းဘဝလေး ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းသွားနိူင်ပါစေကွယ် လို့ ဆုတောင်းပေးယုံမှတပါး…… ခြောက်လခန့်အကြာ……….. အသားခပ်လတ်လတ် မျက်ခုံးမျက်လုံးကောင်းကောင်းနှင့်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် လွန်စွာလှသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့်ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ကြည်လင်သော အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ ကောင်လေးတစ်ယောက် တစ်ယောက်လက်ကိုတစ်ယောက်ချိတ်ရင်းက အပ်ချုပ်ပစ္စည်းများရောင်းသော ဆိုင်လေးအတွင်း လှမ်းဝင်လာလေသည်။
ဆိုင်အတွင်းမှ ဗိုက်ဖုံးအင်္ကျီလေးနှင့် အမျိုးသမီးလေးက ဈေးဆိုင်အနောက်က မြက်ပင်များခုတ်ထွင်နေသောသူကို `မောင်ရေ ဈေးဝယ်သူလာတယ်၊လာရောင်းပေးပါဦး ´လို့လှမ်းခေါ်လိုက်တော့ အမျိုးသားလုပ်သူက ဆိုင်ရှေ့ထွက်လာရင်းက`ဟင်´ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ပြီးမှ `ညီမလေး ဘာယူမလည်း…´ `…..တွေ လိုချင်လို့ အကို´ ဟုတ် ခဏလေး ထည့်ပေးမယ်နော်၊ဒါနဲ့ ညီမတောင် ဈေးလာမဝယ်တာကြာပြီနော် ဟုတ်တယ် အကို ကျောင်းပြန်တက်နေလို့ ပါ ၊
ဒါက ညီမ ချစ်သူပါ၊နာမည် က……ပါ ကျောင်းမှာတွေ့ကြတာလေ အော် ဟုတ်လား ညီမလေး ၊တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် ညီ ဟုတ် အကို ဝမ်းသာပါတယ် ခင်ဗျ မမရော ကိုယ်ဝန်ဘယ်နှစ်လ ရပြီလည်း၊ဘာလေးလည်းသိပြီလား၊ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်နော် မမ ဆိုင်ထဲမှာထိုင်နေသော မိုးမြင့်သူကို အပြုံးကလေးနဲ့လှမ်းပြောလိုက်တော့ မိုးမြင့်သူက ခုနှစ်လရှိပြီ ညီမလေး၊အာထရာဆောင်းတော့ နင့်အကိုက မရိုက်ခိုင်းထားဘူးလေ ၊ဘာလေးဖြစ်ဖြစ်တဲ့ ဟုတ်ပါပြီ မမရေ နောက်မှ လာတော့မယ်နော် ပြန်ပြီ မမ အေးအေး ညီမလေး ထွက်ခွါသွားသော စုံတွဲကို မျက်စိတဆုံး လိုက်ကြည့်ရင်း ​ကြေကွဲ ပျက်စီးခဲ့ရပေမယ့် အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းလိုက်နိူင်ခဲ့သော သူရဲ့ သစ္စာတရားတွေနဲ့ ဖြူဖြူစင်စင် ဘဝကို လျှောက်လှမ်းသွားနိူင် ခဲ့သော မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုတွေးမိတော့ မျက်ရည်စတချို့ သူ့ပါးပြင်ပေါ် လိမ့်ကာ လိမ့်ကာ စီးကဖလာတာကို မိန်းမ မမြင်အောင်သုတ်ရင်း… အချစ်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အိမ်ထာင်ဘက်အပေါ် သစ္စာမဖောက်မိကြစေဖို့ ၊မိသားစုဘဝ လေးကို အမည်းစက် ကင်းကင်းလျှောက်လှမ်းသွားနိူင်ဖို့၊မိမိကြောင့်သူတပါးရဲ့ ဘဝလေး မထိခိုက် မနစ်နာစေဖို့ တောင်းဆုပြုလျှက်……